#farayarenews Barre Hiiraale oo shaaciyay halka uu ku suganyahay kuna goodiyay in uu dhawaan ku laabanayo Kismaayo. Barre Aadan Shire, Hiiraale oo maanta si xoog ah ay uga saareen Kismaayo ciidamada Kenya iyo dagaalamayaasha Axmed Madoobe oo is- kaashanaya ayaa waxa uu shaacaiyay in uu ku suganyahy duleedka magaalada uuna isu diyaarinayo qaabkii uu ugu laaban lahaa gudaha magaalada laga sooceyriyay. Barre Hiiraale ayaa waxa uu yiri, “Duleedka magaalada ayaan ku sugannayahay. Waa isi soo hubeyneynaa waana ku laabaneynaa Gudaha magaaladaa waxaa ka socda wax ka baxsan xeeraraka dagaalka aduunka oo ay kamid yihiin kufsi, Boob iyo tacadiyo dheeraad ah oo ay hor- seed u tahay Kenya. Innaga waxaaa magaalada naga soo saaray Kenya. Iyada ayaa hada maamuleysa magaalada oo xaquuqdeenna na duud-siisay”. “Waxyaabaha aan uga baxnay magaalada waxaa kamid ah in dhibaata culus shacabkii loo geysanayo oo madaafiic lagu duqeynayo arintaasina aysan joogsaneyn hadii uu dagaalku sii socdo dadka dhamaanayaana ay dadkeennii yihiin. Waxa aan u tureynay Shacabka. Xeelad meleteri ayeey aheyd ee ma maqnaan donno”, Barre ayaa intaa ku daray hadalkiisa Waxa uu Barre Hiiraale ka jaabay su’aal laga weydiiyay xariirka ka dhexeeya kooxdooda iyo Shabaab maadaama lagu eedeeyo in ay iska ka shanayaan dagaalka Axmed Madoobe arintaas oo uu ku sheegay mid waxba kama jiraan ah hasa yeeshee ay dhici doonto in Shabaabka iyo inta diidan Kenya ay u midoobo doonaan ka xureynta dalka ciidanka Kenya ee soo duulay iyo calooshood u shaqeestayaasha ay difaaca ka dhiganayaan. | http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders #farayarenews Barre Hiiraale oo shaaciyay halka uu ku suganyahay kuna goodiyay in uu dhawaan ku laabanayo Kismaayo. Barre Aadan Shire, Hiiraale oo maanta si xoog ah ay uga saareen Kismaayo ciidamada Kenya iyo dagaalamayaasha Axmed Madoobe oo is- kaashanaya ayaa waxa uu shaacaiyay in uu ku suganyahy duleedka magaalada uuna isu diyaarinayo qaabkii uu ugu laaban lahaa gudaha magaalada laga sooceyriyay. Barre Hiiraale ayaa waxa uu yiri, “Duleedka magaalada ayaan ku sugannayahay. Waa isi soo hubeyneynaa waana ku laabaneynaa Gudaha magaaladaa waxaa ka socda wax ka baxsan xeeraraka dagaalka aduunka oo ay kamid yihiin kufsi, Boob iyo tacadiyo dheeraad ah oo ay hor- seed u tahay Kenya. Innaga waxaaa magaalada naga soo saaray Kenya. Iyada ayaa hada maamuleysa magaalada oo xaquuqdeenna na duud-siisay”. “Waxyaabaha aan uga baxnay magaalada waxaa kamid ah in dhibaata culus shacabkii loo geysanayo oo madaafiic lagu duqeynayo arintaasina aysan joogsaneyn hadii uu dagaalku sii socdo dadka dhamaanayaana ay dadkeennii yihiin. Waxa aan u tureynay Shacabka. Xeelad meleteri ayeey aheyd ee ma maqnaan donno”, Barre ayaa intaa ku daray hadalkiisa Waxa uu Barre Hiiraale ka jaabay su’aal laga weydiiyay xariirka ka dhexeeya kooxdooda iyo Shabaab maadaama lagu eedeeyo in ay iska ka shanayaan dagaalka Axmed Madoobe arintaas oo uu ku sheegay mid waxba kama jiraan ah hasa yeeshee ay dhici doonto in Shabaabka iyo inta diidan Kenya ay u midoobo doonaan ka xureynta dalka ciidanka Kenya ee soo duulay iyo calooshood u shaqeestayaasha ay difaaca ka dhiganayaan. – http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders
#farayarenews Barre Hiiraale oo shaaciyay halka uu ku suganyahay kuna goodiyay in uu dhawaan ku laabanayo Kismaayo. Barre Aadan Shire, Hiiraale oo maanta si xoog ah ay uga saareen Kismaayo ciidamada Kenya iyo dagaalamayaasha Axmed Madoobe oo is- kaashanaya ayaa waxa uu shaacaiyay in uu ku suganyahy duleedka magaalada uuna isu diyaarinayo qaabkii uu ugu laaban lahaa gudaha magaalada laga sooceyriyay. Barre Hiiraale ayaa waxa uu yiri, “Duleedka magaalada ayaan ku sugannayahay. Waa isi soo hubeyneynaa waana ku laabaneynaa Gudaha magaaladaa waxaa ka socda wax ka baxsan xeeraraka dagaalka aduunka oo ay kamid yihiin kufsi, Boob iyo tacadiyo dheeraad ah oo ay hor- seed u tahay Kenya. Innaga waxaaa magaalada naga soo saaray Kenya. Iyada ayaa hada maamuleysa magaalada oo xaquuqdeenna na duud-siisay”. “Waxyaabaha aan uga baxnay magaalada waxaa kamid ah in dhibaata culus shacabkii loo geysanayo oo madaafiic lagu duqeynayo arintaasina aysan joogsaneyn hadii uu dagaalku sii socdo dadka dhamaanayaana ay dadkeennii yihiin. Waxa aan u tureynay Shacabka. Xeelad meleteri ayeey aheyd ee ma maqnaan donno”, Barre ayaa intaa ku daray hadalkiisa Waxa uu Barre Hiiraale ka jaabay su’aal laga weydiiyay xariirka ka dhexeeya kooxdooda iyo Shabaab maadaama lagu eedeeyo in ay iska ka shanayaan dagaalka Axmed Madoobe arintaas oo uu ku sheegay mid waxba kama jiraan ah hasa yeeshee ay dhici doonto in Shabaabka iyo inta diidan Kenya ay u midoobo doonaan ka xureynta dalka ciidanka Kenya ee soo duulay iyo calooshood u shaqeestayaasha ay difaaca ka dhiganayaan.
Barre Hiiraale oo
shaaciyay halka uu ku suganyahay kuna
goodiyay in uu dhawaan ku laabanayo
Barre Aadan Shire, Hiiraale oo maanta si xoog
ah ay uga saareen Kismaayo ciidamada Kenya
iyo dagaalamayaasha Axmed Madoobe oo is-
kaashanaya ayaa waxa uu shaacaiyay in uu ku
suganyahy duleedka magaalada uuna isu
diyaarinayo qaabkii uu ugu laaban lahaa gudaha
magaalada laga sooceyriyay.
Barre Hiiraale ayaa waxa uu yiri, “Duleedka
magaalada ayaan ku sugannayahay. Waa isi soo
hubeyneynaa waana ku laabaneynaa Gudaha
magaaladaa waxaa ka socda wax ka baxsan
xeeraraka dagaalka aduunka oo ay kamid yihiin
kufsi, Boob iyo tacadiyo dheeraad ah oo ay hor-
seed u tahay Kenya. Innaga waxaaa magaalada
naga soo saaray Kenya. Iyada ayaa hada
maamuleysa magaalada oo xaquuqdeenna na
“Waxyaabaha aan uga baxnay magaalada waxaa
kamid ah in dhibaata culus shacabkii loo
geysanayo oo madaafiic lagu duqeynayo
arintaasina aysan joogsaneyn hadii uu dagaalku
sii socdo dadka dhamaanayaana ay dadkeennii
yihiin. Waxa aan u tureynay Shacabka. Xeelad
meleteri ayeey aheyd ee ma maqnaan donno”,
Barre ayaa intaa ku daray hadalkiisa
Waxa uu Barre Hiiraale ka jaabay su’aal laga
weydiiyay xariirka ka dhexeeya kooxdooda iyo
Shabaab maadaama lagu eedeeyo in ay iska ka
shanayaan dagaalka Axmed Madoobe arintaas
oo uu ku sheegay mid waxba kama jiraan ah
hasa yeeshee ay dhici doonto in Shabaabka iyo
inta diidan Kenya ay u midoobo doonaan ka
xureynta dalka ciidanka Kenya ee soo duulay iyo
calooshood u shaqeestayaasha ay difaaca ka
→ #farayarenews Barre Hiiraale oo shaaciyay halka uu ku suganyahay kuna goodiyay in uu dhawaan ku laabanayo Kismaayo. Barre Aadan Shire, Hiiraale oo maanta si xoog ah ay uga saareen Kismaayo ciidamada Kenya iyo dagaalamayaasha Axmed Madoobe oo is- kaashanaya ayaa waxa uu shaacaiyay in uu ku suganyahy duleedka magaalada uuna isu diyaarinayo qaabkii uu ugu laaban lahaa gudaha magaalada laga sooceyriyay. Barre Hiiraale ayaa waxa uu yiri, “Duleedka magaalada ayaan ku sugannayahay. Waa isi soo hubeyneynaa waana ku laabaneynaa Gudaha magaaladaa waxaa ka socda wax ka baxsan xeeraraka dagaalka aduunka oo ay kamid yihiin kufsi, Boob iyo tacadiyo dheeraad ah oo ay hor- seed u tahay Kenya. Innaga waxaaa magaalada naga soo saaray Kenya. Iyada ayaa hada maamuleysa magaalada oo xaquuqdeenna na duud-siisay”. “Waxyaabaha aan uga baxnay magaalada waxaa kamid ah in dhibaata culus shacabkii loo geysanayo oo madaafiic lagu duqeynayo arintaasina aysan joogsaneyn hadii uu dagaalku sii socdo dadka dhamaanayaana ay dadkeennii yihiin. Waxa aan u tureynay Shacabka. Xeelad meleteri ayeey aheyd ee ma maqnaan donno”, Barre ayaa intaa ku daray hadalkiisa Waxa uu Barre Hiiraale ka jaabay su’aal laga weydiiyay xariirka ka dhexeeya kooxdooda iyo Shabaab maadaama lagu eedeeyo in ay iska ka shanayaan dagaalka Axmed Madoobe arintaas oo uu ku sheegay mid waxba kama jiraan ah hasa yeeshee ay dhici doonto in Shabaabka iyo inta diidan Kenya ay u midoobo doonaan ka xureynta dalka ciidanka Kenya ee soo duulay iyo calooshood u shaqeestayaasha ay difaaca ka dhiganayaan.
← war deg deg ah #farayarenews Beesha Habar Gidir oo ka careesan Balantii looga baxay Kulan Xasaasi ahna hada Muqdisho uga socda Waxaa Magaalada Muqdisho xiligan kasoconaya kulan Xasaasi ah oo ilbaabada u xiran yahiin kaa ay yeelanayaan Odayaasha Dhaqanka Beesha Habar Gidir , Siyaasiyiinta iyo Saraakiisha Beeshaasi kuwaa oo ka arin sanayaan balantii xalay looga baxay Markii Sheekh Xasan Daahir Muqdisho keeneen. Kulanka oon xog dheeraad ah aan laga helin Karin ayaa Odayaal kusugan oo si hoose Warbaahinta ula hadlay waxa ay sheegeen in ay ka arinsanayaan Sida ay Dowlada Soomaaliya ula dhaqantay go’aana ay ka qaadanayaan Dowlada Soomaaliya ay ku eedeeyeen in ay uga baxday balan si xuna ula dhaqan tahay Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Xubnihii kasoo ka xeeyay Magaalada Cadaado. Nabadoon Xasan Cilmi Yaxye oo ka mid ah xubnaha ka qeyb galaya kulankaas ayaa sheegay in kulanka ay u dhan yihiin shanta beelood ee Habar Gidir ayna uga hadlayaan balan furka ay ku sameysay dowlada Somalia iyo qaabkii loola dhaqmay Shiikh Xasan Daahir Daahir Aweys iyo xubnihii keenay Muqdisho oo xarig iyo jirdil la isugu daray. Kulanka ay yeelanayaan Odayaasha iyo Xubnaha kale ee kasoo jeeda Beesha Habar Gidir ayaa u muuqda kuwa aad uga careesan sida ay Xalay ula dhaqmeen Ciidamada Nabad Sugida Dowlada Soomaaliya oo xoog ku ka xeestay Sheekh Xasan Daahir Aweys sidoo kale Jir dil xoogan u geestay Xubno Saraakiil , Xildhibaano iyo Odayaal kasoo jeeda Beesha Habar Gidir Cadaadana kasoo kaxeeyay Sheekh Xasan Daahir Aweys.